Ithegi: umbhali | Martech Zone
Ewe, zisekhona iiBlogs ezinkulu phaya ukufumanisa… Nantsi indlela yokuziKhangela
NgoLwesihlanu, Oktobha 5, 2018 Douglas Karr
Iiblogi? Ngaba ndibhala ngenene ngokubhloga? Ewe, ewe. Ngelixa igama lesambrela elisemthethweni ngoku esilisebenzisa kolu shishino kukuthengisa umxholo, ukubhloga kuqhubeka njengeyona fomathi ixhaphakileyo iinkampani ziyisebenzisayo ukufikelela kumbono wazo nakubathengi abakhoyo ngoku. Zange ndayiqonda into yokuba igama elithi ukubhloga liya kukhula liye kwi-obselecense, kodwa lisetyenziswa kakhulu kunakuqala. Ngapha koko, ndihlala ndibhekisa ekubhaleni kwam apha njengamanqaku kunokuba
Kutheni kwaye uyicwangcisa njani iakhawunti yeGravatar
NgoMgqibelo, Julayi 18, 2015 NgoLwesithathu, Julayi 22, 2015 Douglas Karr
Eyona nto iphambili ekwandiseni igunya kunye nokuphucula umgangatho weinjini yokukhangela kukufumana ukukhankanywa kwiindawo ezifanelekileyo malunga nendawo yakho, uphawu, imveliso, inkonzo okanye abantu. Abaqeqeshi bezonxibelelwano noluntu bayazibeka ezi ncoko mihla le. Bayayiqonda into yokuba ukufumana abathengi babo ingqalelo kwi-intanethi eqhuba ukwazisa uphawu. Ngotshintsho lwealgorithm, ikwasicwangciso esiliqili sokuphucula uluhlu lwamagama aphambili kwiinjini zokukhangela. Ngamanye amaxesha, asinalo ithuba lokwenza udliwanondlebe okanye ukubhala malunga neemveliso
Yintoni AuthorRank kwaye Kutheni kubalulekile
NgoLwesihlanu, Februwari 17, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Oko bendikhathaza abathengi bam kwaye besidibanisa ikhowudi yokubhala kuzo zonke iisayithi zethu zeWordPress okoko ndabona iziphumo ezintle zokwenza kwibhlog yethu. Nalu ulwazelelo olukhulu lokunceda ukukhuthaza ukubhala nangakumbi… ukubhala igama, AuthorRank. Umbhali ophakathi, umthengisi okanye umvelisi womxholo, uMlobi weRank unika ithuba elihle lokufaka uphawu lophawu lobuqu, kodwa ikwasenza sinoxanduva ngokomgangatho womsebenzi esiwenzayo. Ukuvavanya umgangatho